In la isku qabsado Guddoonka Golaha Wakiilladu wuxuu muujinayaa khalad siyaasadda laga fahmey (Muxuu sharcigu ka qabaa?) | Hadalsame Media
Home Wararka In la isku qabsado Guddoonka Golaha Wakiilladu wuxuu muujinayaa khalad siyaasadda laga...
In la isku qabsado Guddoonka Golaha Wakiilladu wuxuu muujinayaa khalad siyaasadda laga fahmey (Muxuu sharcigu ka qabaa?)
(Hargaysa) 02 Agoosto 2021 – Waxaa Hargaysa ka taagan muran ku aaddan is jiidjiidad ka dhashay cidda noqonaysa Guddoonka Golaha Wakiillada ee KMG ah maalinta berritoole iyo guud ahaanba midka sida rigliga ah ugu soo baxaya.
Haddaba, Garyaqaan Mubaarak Aar, ayaa Saabt TV u sharraxaya waxa uu sharcigu ka qabo cidda guddoominaysa Golaha Wakiilada oo berri shiraya iyo sidoo kale xeerka ka degsan ilaalinta danaha is diiddan.
Wuxuu Qarreenku sheegay in Qodobka 44-aad ee Maamulka Somaliland uu dhigayo inuu guddoominta KMG ah qabto qofka ugu da’da wayn Xildhibaannada, balse aanay taa lafteedu iska furrayne uu xeerku sii fasirayo qofka ugu da’da wayn laftiisa lagaga baahan yahay in aanu musharrax ahayn, sida ku dhigan Qodobka 14-aad ee Xoor-hoosaadka.
Sidoo kale Qodobka 16-aad, Fakhraddiisa 2-aad ee Xeer-hoosaadka waxaa ku xusan, in marka xilka laga qaadayo Guddoonka Golaha Wakiillada sidoo kale xilka guddoominta laga rafacayo oo loo dhiibayo cidda ugu da’da wayn ee aan markaa dan gaar ihi uga jirin xilka Guddoominta, marka xilka la saarayana ay sidaa oo kale tahay in qof sharraxani aanu guddoomin kal-fadhiga Aqalka.
Sidaa darteed, wuxuu Garyaqaanku sheegay in qofka sharraxan ee xilka doonaya iyo midka sida KMG ah u guddoominaya uu xeerku khasab cad ka dhigayo inay 2 qofood kala noqdaan oo aanay isku hal qof marna noqon karaynin.
Waxaa kale oo Qodobka 16-aad ee Xeer-hoosaadka ku xusan in xitaa haddii ay labada guddoomiye xigeen ay doonayaan inay isu sharraxaan guddoonka oo uu booskaasi bannaanaado inay marka hore iska casilaan xilalka ay hayaan, kahor inta aanay isa sharrixin.
Garyaqaanka ayaa sidoo kale sharraxay in lugaha iyo mabaadii’da ay cadaaladdu asaasiyan ku taagan tahay ay yihiin in qofna aanu ka gar niqin kiis isaga saamaynaya ama uu ku lug leeyahay, sidaa darteed aanu guddoomiye iyo musharrax hal qof isku noqon karin.
Garyaqaanka ayaa sidoo kale tilmaamay arrin ay Soomaali badani khalad ka fahamtey oo ah in Guddoonka Baarlamanku uu awood leeyahay taasoo ah mid khiyaali ah, balse taa biddaalkeeda ay awooddiisu aad u kooban tahay oo uu goluhu awoodda iyo arriminta leeyahay isaguna aanu ka badnayn nidaamin iyo ku dhawaaqidda go’aamada la gaaro, sidaa darteed, ay khalad tahay in laga badbadiyo oo la isku qabqabsado xilkan.
Previous articleCiidamada Tigreega oo hanjabaad culus u diray DF Itoobiya & Eritrea (Go’itaan ay doonayaan)
Next articleISKA JIR: Calaamadaha lagu garto inay SONKOR badani jirkaaga gashay & DHIBAATOOYINKA ka dhalan kara!